Ngaba yintoni isibonelelo seDigital FM Transmitter? -CZH / Fmuser Fm Transmitter China Umxhasi Qhagamshelana: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyueokera99991
ikhaya » iindaba » Ngaba yintoni isibonelelo seDigital FM Transmitter?
Ngaba yintoni isibonelelo seDigital FM Transmitter?
Umhla: 2019-03-27 / udidi: iindaba
Udluliselo lwedijithali FM inezi zibonelelo zilandelayo zibalulekileyo ngokuthelekiswa neAnalog FM Transmitter:
1. Ukuphucula umgangatho wesandi: isebenzisa iteknoloji yeDijithali enguMqondiso (DSP), umgangatho wesandi ufana neCD.
2. Ukuphucula ukuthembeka kodluliso: kusetyenziswa isekethe yokudityaniswa okukhulu njengezinto eziphambili. (Amanqaku aphantsi kunye nokuxhomekeka okuphezulu kwe-LSI), endaweni yamacwecwe amaninzi kwi-Analog FM Transmitter, umgangatho kunye nokuthembeka kuphuculwe kakhulu.
3. Umsebenzi uyatshintshatshintsha kuMshumeli we-FM: isebenzisa itekhnoloji yerediyo engenazingcingo, ukuze umzi-mveliso uvelise imisebenzi eyahlukeneyo yeeTrans Transmitters ngeHardware efanayo. Kulungele kakhulu ukuvelisa kunye nokunyusa
4. Inokuqonda ukulawulwa okukude okude; Ukubeka iliso kunye nokuchongwa kwempazamo: ngenxa yazo zonke iinguqulelo zomsebenzi weHardware ibe yiSoftware, ke isikrini seTransmitter LCD inokubonisa iiparamitha zesimo esingenakubonisa kuAnalog Transmitter. Kananjalo ezi paramitha zesimo zinokubekwa esweni (RS232 / RS485 / CAN / TCPIP) Inkqubo yokulawula kude.
5. Inokuqonda utshintsho oluzenzekelayo lokufakelwa komqondiso we-Double-Audio: Inokufaka igalelo le-Analog kunye ne-Digital Audio Signal kwiDigital FM Transmitter xa isikhululo sikanomathotholo sifuna imo yokuthembela ephezulu. Ayifuni shushu lwangaphandle lwangaphandle, kuba ine-switch automatic yangaphakathi kunye nesiginali yomsindo wedijithali.
«Ngaphambili: I-FMUSER RDS-Encoder ibonakalisiwe kwiNtlanganiso yeQonga yeRSS
Uyintoni umgaqo wokusebenza kwetradiyo yedijithali yerediyo? :Okulandelayo "